धुताहा ओली र प्रचण्डलाई कडा झड्का दिँदै बामदेवले आफ्नो छुट्टै पार्टी खोल्न गरे यस्तो तयारी, को-को सामेल हुँदैछन बामदेवको गोप्य भेलामा ? – Gazabkonews
धुताहा ओली र प्रचण्डलाई कडा झड्का दिँदै बामदेवले आफ्नो छुट्टै पार्टी खोल्न गरे यस्तो तयारी, को-को सामेल हुँदैछन बामदेवको गोप्य भेलामा ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अनौपचारीक रुपमा विभाजन भएको समयमा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने दुवै समुहलाई छुट्टै सरप्राइज दिने भएका छन् ।
अहिले सम्म कुनै समुहको समर्थनमा नलागेका गौतम अहिले भैसेपाटीमा बसेर छुट्टै अभियानमा लागेका छन् । उनले दुवै समुहले पार्टी विभाजनलाई बल पुग्ने गतिविधि गरेको भन्दै तटस्थ बसेका छन् ।
तर अर्को साता उनले आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि देशभरीवाट १५०१ जनाको नाम लिष्ट तयार पारेका छन् । उनले तटस्थ नेता कार्यकर्ताको समुह बनाएर पार्टी एकताको अभियान चलाउने भएका छन् । आफ्नो समुहमा उनले तटस्थ नेता कार्याकर्ताको खोजी थालेका हुन् । देशभरी त्यस्ता ब्यक्तिको खोजेर लिष्ट तयार पार्ने काममा उनी लागेको बताइएको छ ।
गौतम निकट स्रोतका अनुसार अहिले १५०१ जनाको एकता अभियान गठनको लागि यतिबेला बामदेव ब्यस्त छन् । यद्धपी उनलाई आफ्नो समुहमा ल्याउन दुवै पक्षले प्रयास जारी राखेका छन् । भैसेपाटीमै पुगेर दुवै पक्षका नेताहरुले परामर्श गर्दै आएका छन् ।
उनले दुवै पक्षलाई आफु कुनै समुहमा नलाग्ने बताउँदै आएका छन् । गौतमको निर्देशन अनुसार देशभर तटस्थहरुको पहिचान गरी नाम संकलन गर्दै एकता अभियानमा नाम राख्न शुरु भएको छ ।
गौतमले अर्को हप्ता १५०१ को एकता अभियानको घोषणा गर्दैछन् । उनी निकटस्थका अनुसार अभियानमा तटस्थ रहेकाहरुको उल्लेख्य संख्या हुनेछ ।
यतिबेला गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्रीसहित आकर्षक मन्त्रालय र सहअध्यक्षको प्रस्ताव गरेका भए पनि उनले त्यो प्रस्ताव अस्विकार गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफ्नो समूहमा महत्वपूर्ण स्थान दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, गौतमले स्वीकार गरेनन् ।